Mootii Daa’imaa Yookan Maraataa (A baby or Mad King) |
Home Afaan Oromoo Mootii Daa’imaa Yookan Maraataa (A baby or Mad King)
Damee Boruu: Adooleessa 09/2020
Abjuun Mootii tahuu fi dhugaan Mootii tahuu jidduu gargaarummaa guddatu jira. Kononeel Abiyi Mootii Daa’imaa(Ye ceqilaa Nugus) haa tahu maraataa waan qabatamaan irraa beeknu hin qabnu. Akka fakkaatu yoo tahe mul’ata haadha isaan akka Mootii tahu gaafa mudama isaa himatee jira. Mul’ata haadha isaa bakkaan gahuuf akkuma Masaraa Miniliki seeneen lafee Mootota Habashaa boolla keessa funaanee siidaa dhaabbaaf kan mataa isaas cinaa itti kalaalataa jira.
Namni kun kan abjuun maraate yookan sammuun isaa socho’e gara daa’ima wagga lamaa itti kan deebi’e fakkaata. Waan hundaa dura hojiin isaa Masaraa Minilki haaromsuu fi miidhagsuu irratti kan xiyyeefate dha. Masaaraa Miniliki kana keessatti bakka bashanaa fi hoolmaa qopheessaa jira. Isa irra darbee haroo(Man-Made Lake) kan habaaboon marfamee ijaaruun waan dinqisfatamuu qabu hojjechaa jira jedhama. Habaaboo Bolee bakka xiyaaraan qubatee jalqabee amma Masaraa Miniliki gahu bitaa fi mirgaan diriirsee miidhagsaa jira jedhama.
Namni kun maraatuu yookan daa’ima abjuu keessa jiru dha. Yaroo kana hundaa gochaa jiru uummatni inni irratti Mootii tahe milliyoona heddhuun lakkawwamuu beelaa, hiyuumaa, dhukkubaa fi gadadoon akka baala muka irraa harca’aa jira. Horiin bashabashaa jiru kun irra guddaan kan dhufuu dhaloota boruun kan liqeefatamu irraa ti. Arabootaaf konkolaataa ofee kadhaan kan argatu amma kana guddaa miti. Karaa biraa mootummaan isaa hormaata argamsiise tokko illee hin qabu.
Yaaddoon isaa inni duraa fi guddaan eenyu akka aangoo isaa kana isa irraa fudhatu of irraa eeguu qofa. Ammaaf dabtaroota Habashaa fi nafaxanyoota of duba yaasaa jira. Sababni isaa mul’atni haadha kee dhugaa dha. Mootii tahuuf xiqqotu si hafaa jira jedhanii waan harka isaaf rukkutaa jiraniif abdii isaanii irraa qaba. Akkuma inni isaaniin meshaa godhatee mootii tahuuf fiigu isaan immoo isa qabatanii waan barbaadan hundaa hojjetachaa jiru. “Cabaan lamaan walitti fayyaa tokko hin tahu” akkuma jedhan wal fudhatanii hallayyaa bu’uuf qophaa’aa jiru.
Hojii Mootii Daa’ima kanaa ilaala. Waxxabajjii bara darbee Masaraa mataa isaatti dhukaasa bane Jeneraala isaa Jeneral Saree Mekonnon ajjeese. Sababni isaa wagga 27 Jeneral Saree Mekonnon gadi jedhee harka fudhaa jiratee amma ajaja kenuufiin yaaddoo itti tahee ajjeese hobaafachuu filate. Hojii daa’imaa yookan maraatuu waan taheef malee soorata baasee nagaa argachuu danda’a ture.
Karaa biraa Minilkii fi Masaraa Minilki nama xuqquuf obsa hin qabu jedhee jira. Haacaaluun yoon siidaa Minilki ilaalu farada Oromoo yaabatee arguun na aarsaa jedhe. Kana malees nfxanyaan, kaleessas, har’as borus diinaa jedhe. Haacaaluun goota sodaa hin beekne. Du’a sodaatee dhugaa dubbachuu irraa booda deebi’e hin beeku.
Haacaaluun waan maqaa Minilki xurreessu guddaa dubbate. Torbaan tokko keessatti nu ajjeessuu qabda jedhanii nafxanyoonni Masaraa Minilki keessa jiranii fi ala mila isaa jalatti kufanii halkanii fi guyyaa kadhatan. Mootiin daa’imaa kun illee isaan dhaga’ee Haacaaluu ajjeesse. Rasaasni Haacaluu ajjeese agartuu ija Uummata Oromoo hundaa rukkute. Nama Milliyoona shantamatu argartuu ija isaa dhabe. Kana booda atii fi nafxanyoonni kee wal fudhatanii hallayyaa bootu. Harka keessan ilmaan Oromoo fi Oromiyaa irraa kaasaa. Yoo tasa achi buutee baduu barbaadan duwwaa hojii keessan yakkamaa fi fokkisaa kana itti fufaa.
Haacaaluu ajjeeftee kaatee bakka owwalaa fi sirna owwaalaa dhowwatee waraanan marsitee akka nama boojuu tokkotti owwaluun maal sitti fakkaata? Ati daa’ima keessa iyyuu ijoollee ishee fincaan isheen dhoqqee bukkistee xaphatuu gadi. Waraanan mana maatii isaa marsitee firoota ajjeessuun karaa dha? Nama harka qullaa jiru hundaa ajjeeftanii diina keenya barbadeessine(tedemsesu) jechuun ni fakkaata? Dhiira yoo tatan WBO torbaan lama keessatti fixna jettan maaliif hin fixne? Yakka hojjetanii kaatanii hojii keessan “Shanee, TPLF yookan Biyya Misiraatu” Haacaaluu ajjeese yaroo jettan namni kan isin dhugeefatu sinitti fakkaata?
Mootiin daa’imaa kun amma immoo wareeree rasaasa isaa karaa hundaan(all direction) dhukkaasaa jira. Miila maataa isaatu dhukkaasaa jira.Warra mootummaa isa wajjin jiru miti warri partii Blixiginaa keessa jiru iyyuu hidhamaa fi ajjeefamaa jira. Yaroo dhukkubni Covid-19 nama fixaa jiru kana ilmaan Oromoo kumaatan mana hidhaa keessatti ukaamsitanii bal’aaf saaxiluun itti gaafatama guddaa qabdu. Kana malee Internet fi midiyaa uummatni oduu dhukkuba kanaa akka hin arganneef irraa cufuun badii itti yaadamee hojjetamu waan taheef uummata fixxuu(genocide) akka tahe hin dagatiina.
Mootiin Daa’imaa kun wagga lama booda gadi bahee an waan Oromo taheef natti hinfanii jiru jechuun hiikaa hin qabu. Har’a gaafa ilmaan Oromoo kumaataan hidhuu fi ajjeessu Oromoo tahuun isaa itti mul’ata? Amma gadi baa’ee an waan Oromoo haa jedhu malee kan afaan isaa keessa bahu Oromoo xiqqeessu fi arabsuu qofa ture. Oromo tahuu fi dhiisu utuu hin taane waan Oromoof tahu hojjechutu Oromoo nama godha. Namni dhiiga namaa qeensee ilaale Oromoo nama godhuu fi Oromummaa nama irraa molqu hin jiru. Ilmi Oromoo haqaa, mirgaa fi hiree Uummata Oromoof mirkanneessuuf hojjeta. Kaayyoon Oromummaa salphaati kanuma. Ati garuu nafxanyootaaf hoogganaa taatee Uummata Oromoo lafa irraa dugugdee balleessaa jirta. Kanfaau uummatni Oromoo dhiifama yaroo lammaffaa isaaf gochaa hin jiru.
Waggaa sodomaaf Uummata Oromoo qabsoo gochaan ture jetta qaanii tokko malee. Bara EPRDF wajjin turte gantuu fi gaadduu(Spy) taatee Wallaga keessa akka turte ni himama. Afaan Amhaaraa fi Tigree malee hin beeku jettee ijoollee Oromoo gowwomsitee ficcisiisa turuun keee ni yaadatama. Sun gahaa hojii kee EPRDF keessatti qabaachaa turte waan taheef waan godhamuu danda’u hin jiru. Garuu erga aangoo argtee wagga lamaan kana keessatti waan Oromoon jaallatuu fi waan Oromoo ilaallatu hojjechaa jiru. Uummata Oromoo kutaa fi Ammantiin gargar qooduuf yaalleera. Qarree f Qeerroo Oromoo dantaa, horii fi kennaan burjaajeessuuf yaalleera. Humna RIB Boorana, Gujii, Wallagaa fi Waloo itti bobaase qabenya uummataa barbdeessaa, dubrtii gudeedaa, guddaa fi xiqqaa ajjeessaa fi hidhaa jirta. Naannoo Oromiyaa hundaa keessatti nama ajjeessuu fi hidhuun hojii Mootii Daa’imaa kana keessa isa duraa tahee jira. Abiyi Ahmed Oromo taaate Diqaalaa Haacaaluu booda abdaariin Oromiyaa si baachaa hin jiru. Daddaffiin nu irraa deemi!
Injifannoo uuummat Oromoof!
Previous articleNile Dam row: Egypt and Ethiopia generate heat but no power
Next articlePrime Minister Abiy Ahmed Has Failed To Reaffirm Human Rights, Rule Of Law
Falmataa - January 17, 2021 0